Amakhadi eTarot -iTarot Spin yasimahla, iMbali kunye neNjongo
Ukusetyenziswa kwe amakhadi e-tarot Ngokusisiseko babuyela kumaKristu, apho babesetyenziselwa ukubalisa amabali kunye namava. Emva kwexesha la makhadi e-tarot aqhelekile usasaze umyalezo kunye nebali likaKristu. Le yokugqibela ibalwa phantsi kwamaRoma, kodwa iMbali eyiyo yeTarot yenye.
1 Amakhadi eTarot anentsingiselo
1.1 Ukusetyenziswa kwamakhadi okudlala kwi-tarot
1.2 Isimboli yamakhadi eTarot
1.3 Idiski yeetarot emhlabeni
2 Amakhadi eTarot asasazeka
3 Amakhadi eTarot kunye neMajor Arcana
Amakhadi eTarot anentsingiselo
Ukusetyenziswa kwegama «I-tarot»Iphuhlisiwe ukusukela ngonyaka 1350 AD xa amaTaliyane ayila eli gama, apho livela khona «itarocchi«, Nangona Amakhadi e-tarot alandelwa eMpuma, oosiyazi belo xesha babhengeza phezu kophahla lwendlu ukuba eyona ntsingiselo yegama "Tarot" ivela kumagama amabini anemvelaphi yase-Egypt, apho intsingiselo yayo ithi "eyona ndlela«.
Ukusetyenziswa kwamakhadi okudlala kwi-tarot
El Ukusetyenziswa kwamakhadi okudlala kwi-tarot Bangeniswa eYurophu apho sinokwahlulahlula kwizinti ezine ezifanayo, ezaziwa ngokubanzi «Iindebe«,«Amakrele«,«Monedas"Y"Bastos«. Ukusukela ngoko eYurophu iileta nganye ineentsingiselo ezithile, kwaye apho oonobumba bavela kwaye bazalwa «Inyanga»,«Ilanga», Kwaye yonke indawo esemgangathweni esiyaziyo namhlanje.
Isimboli yamakhadi eTarot
Los Iimboni kunye nemimoya yenze uphawu lwembali edikeni, kwaye kulapho ke into esiyaziyo namhlanje njenge I-Tarot kunye nokujonga kwikamva. Ukuba nemvelaphi yayo amakhadi anesuti amane, kunye nokuhamba kwexesha kunye nokungena kwiXesha langoku, ngenkulungwane ye-XNUMX imisebenzi yobungcibi yenzelwe kwaye yenziwa ibonakaliswe kwimidlalo yamakhadi.
Ngokuyintloko indalo yayingenzelwanga ukuzisebenzisa njenge ukuxela ithamsanqaEzi leta zazenzelwe ekuqaleni ukuze iintsapho ezizezona zityebi ngelo xesha zikwazi ukuzisebenzisa ukonwaba kwimibhiyozo ekhethekileyo. Kuqala ukuba ufuna ukufumana ezo iikhadi ezikhethekileyo zekhadi, Babizwa ngokuba "UTronfifi«, Kodwa kamva babetshintsha igama laba«Tarot«,«Ithagethi /k ","UTarau"Y"ukuvumisa«.
Idiski yeetarot emhlabeni
Akukho mntu uyazi ngokuqinisekileyo ukuba kusetyenziswe nini amakhadi eetarot kwi el mundo yokuvumisa kunye ne-clairvoyance, kodwa sele ikwi- XV yekhulu Amakhadi emifanekiso amatsha aphuhlisiwe ukongeza kwindawo edumileyo yamakhadi. Basebenzisa oothixo, iingcamango zefilosofi, i-Astronomical and Heroes ukuyila.
Ukudalwa kunye nophuhliso lwe ii-tarot zokuqala Kwakungekho ngobuninzi, kuba zazenziwe ngesandla ngelo xesha. Kodwa i ngonyaka we-1440 ngokuveliswa komatshini wokushicilela, kwaye kulapho kwenziwa imveliso ngobuninzi bamakhadi, apho ushicilelo lokuqala ngobuninzi lwaludumile IMarseille Tarot.
Amakhadi eTarot asasazeka
[i-bn-yokwahlulahlula ithegi = »Iindidi»]
Kwaye masifike kuyo XIX kwinkulungwane Ngelo xesha i-tarot yaba sisixhobo esingabalulekanga kubo bonke abantu abathandanayo nabanobugqi ababezinikele kwilizwe elimangalisayo lokuvumisa. Apho isetyenziswa kakhulu kwaye nguvulindlela kuyo Ihlabathi le-tarot yayiyeyeMarseille, apho badala khona Umgangatho wethoth.
Eyokuqala umdlali we-tarot oqeqeshiweyo ngeloxesha wayeyi occultist UJean Pabtiste Alliete, apho wazisa umhlaba wonke ngokusetyenziswa kwe tarot ukuxela kwangaphambili ngekamva kunye nexesha elidlulileyo. Wayekwangumnyusi kumanyano lwamakhadi e-tarot nge-Astrology.
Amakhadi eTarot kunye neMajor Arcana
Kulapho ke i Iimpawu zetarot, ezahlulahlulwe zaba Amakhadi ama-78, baphi Omkhulu uArcana kunye IArcana encinci.
Ukongeza, i-tarot ayisoloko inxulunyaniswa kwaye imanyene njengesixhobo sokubhula, zikwanazo nezinye izinto ezisetyenziswayo ukufuzisela okanye Uvavanyo lweengqondo. la Imbali ye-tarot ilungile kwaye singabhala incwadi yonke ukuze sikwazi ukuyiphuhlisa ngokugqibeleleyo imbali, imvelaphi, indalo yayo kunye nakho konke ukusetyenziswa esinokukunika amakhadi e-tarot.
Kodwa ngokusisiseko i amandla afihliweyo enqanaweni, nokuba sisebenzisa i uthando tarot, okanye oojongilanga tarot, okanye kuba sifuna ukuyisebenzisa kunye IiCeltic Runes, eyona rekhodi inamandla apho kukho imibuzo emininzi engekaphendulwa. Into ebalulekileyo kukuvumisa okukhulu esinokukwenza ngokwethu elidlulileyo, elangoku nelizayo ukuze sihambe ngendlela yethu ngokuzolileyo.
Inkolo yamaCeltic-Yazi le Nkolo ngeNgcaciso